तपाईंको कम्पनीले व्यवस्थित DNS का लागि किन भुक्तान गर्नुपर्छ? | Martech Zone
तपाईंको कम्पनीले व्यवस्थित DNS का लागि किन भुक्तान गर्नुपर्छ?
जब तपाई एक डोमेन रेजिस्ट्रारमा डोमेन रेजिष्ट्रेसन प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, यो प्रबन्धन गर्न सधैं उत्तम विचार हुँदैन जुन तपाईको डोमेनले अन्य सबै DNS प्रविष्टिहरूको समाधान गर्दछ तपाईको इ-मेल, सबडोमेन, होस्ट, इत्यादि समाधान गर्न। तपाईको डोमेन रजिस्ट्रारहरूको प्राथमिक व्यापार छ बिक्री प्रयोगक्षेत्र, यो सुनिश्चित गर्दै कि तपाईंको डोमेन छिटो समाधान गर्न सकिन्छ, सजीलै व्यवस्थित, र निर्मित निर्मित छ।
DNS व्यवस्थापन के हो?
DNS व्यवस्थापन प्लेटफर्महरू हुन् जसले डोमेन नाम प्रणाली सर्भर क्लस्टरहरू नियन्त्रण गर्दछ। DNS डाटा सामान्यतया बहु भौतिक सर्भरहरूमा तैनात गरिन्छ।
DNS कसरी काम गर्दछ?
मेरो आफ्नै साइट कन्फिगरेसन को उदाहरण प्रदान गरौं।
एक प्रयोगकर्ताले ब्राउजरमा martech.zone अनुरोध गर्दछ। त्यो अनुरोध DNS सर्भरमा जान्छ जुन पथ प्रदान गर्दछ जहाँ HTTP अनुरोध राखिएको छ ... नाम सर्वरमा। त्यसोभए नाम सर्भर क्वेरी गरियो र मेरो साइट होस्ट A वा CNAME रेकर्ड प्रयोग गरी प्रदान गरिएको हो। त्यसोभए अनुरोध मेरो साइटको होस्टमा गरिएको छ र ब्राउजरमा समाधान गरिएको फिर्ता मार्ग प्रदान गरिन्छ।
एक प्रयोगकर्ता इमेल ब्राउजर मा martech.zone। त्यो अनुरोध DNS सर्भरमा जान्छ जुन पथ अनुरोध प्रदान गर्दछ जहाँ त्यो मेल अनुरोध कायम गरिएको छ ... नाम सर्भरमा। तब नाम सर्भर क्वेरी हुन्छ र मेरो ईमेल होस्टिंग प्रदायक MX रेकर्ड प्रयोग गरी प्रदान गरिन्छ। त्यसोभए ईमेल मेरो ईमेल होस्टिंग कम्पनीमा पठाइन्छ र मेरो इनबक्समा राम्रोसँग राउटेड हुन्छ।
त्यहाँ DNS व्यवस्थापन को केहि आलोचनात्मक पक्षहरु हो कि एक संगठन बनाउन वा बिच्छेद गर्न सक्छ कि यी प्लेटफर्महरु तपाईलाई समाधान गर्न मद्दत गर्दछ:
गति - तपाईंको DNS इन्फ्रास्ट्रक्चर छिटो, अनुरोधहरू छिटो रूट गर्न सकिन्छ र समाधान गर्न सकिन्छ। एक प्रीमियम DNS प्रबन्ध प्लेटफर्म प्रयोग प्रयोगकर्ता व्यवहार र खोज इन्जिन दृश्यता संग मद्दत गर्न सक्छ।
व्यवस्थापन - तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ कि जब तपाईं एक डोमेन रजिस्ट्रारमा DNS अद्यावधिक गर्नुहुन्छ, तपाईं एक मानक प्रतिक्रिया फिर्ता पाउनुहुनेछ जुन परिवर्तनले केही घण्टा लिन सक्दछ। एक DNS प्रबन्धन प्लेटफर्म परिवर्तन वास्तविक समय मा लगभग हुन्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईले आफ्नो संगठनमा कुनै पनि जोखिम कम गर्न सक्नुहुन्छ अद्यावधिक गरिएको DNS सेटि resहरूको समाधानको लागि कुर्दै।
कटौती - यदि डोमेन रेजिस्टरको DNS असफल हुन्छ भने के हुन्छ? जबकि यो सामान्य छैन, यो केहि वैश्विक DNS आक्रमणहरूसँग भयो। धेरै जसो DNS व्यवस्थापन प्लेटफर्महरू बेमानी DNS विफलता क्षमताहरू छन् जसले तपाईंको मिशन-क्रिटिकल अपरेसनहरू राख्न र एक आउटेज को घटना मा चलाउन सक्छ।
ClouDNS: छिटो, नि: शुल्क, सुरक्षित DNS होस्टिंग
CloudDNS यस उद्योगमा एक नेता हो, छिटो र सुरक्षित DNS होस्टिंग प्रदान गर्दै। तिनिहरु एक DNS सेवाहरु प्रदान गर्दछन् जुन तपाईको संगठनको लागी निजी DNS सर्वरहरु मार्फत एक नि: शुल्क DNS होस्टिंग खाताबाट सुरू हुन्छ:
गतिशील DNS - डायनामिक DNS एक DNS सेवा हो, जसले एक वा बहु DNS रेकर्डहरूको IP ठेगाना स्वचालित रूपमा परिवर्तन गर्दछ जब तपाइँको उपकरणको IP ठेगाना इन्टरनेट प्रदायकद्वारा गतिशील रूपमा परिवर्तन गर्दछ।
माध्यमिक DNS - माध्यमिक डीएनएस एक डोमेन नाम को लागी DNS यातायात वितरित गर्न एक तरिका प्रदान गर्दछ दुई वा अधिक DNS प्रदायकहरूलाई उत्तम सम्भव अपटाइम र रिडन्डन्सीको लागि धेरै सजिलो र मैत्री तरीकाले। तपाईं डोमेन नामको DNS रेकर्डहरू मात्र एकल (प्राथमिक DNS) प्रदायकमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ र दोस्रो प्रदायक माध्यमिक DNS टेक्नोलोजी प्रयोग गरी रहनेछ र स्वचालित रूपमा समक्रमण हुनेछ।
उल्टो DNS - ClouDNS द्वारा प्रदान उल्टो DNS सेवा आईपी नेटवर्क मालिकहरू र अपरेटरहरूको लागि एक प्रीमियम DNS सेवा हो र यो नि: शुल्क योजनामा ​​समावेश गरिएको छैन। रिभर्स DNS होस्टिंग एक व्यवसाय वर्ग सेवा हो र दुबै IPv4 र IPv6 रिभर्स DNS क्षेत्र समर्थन गर्दछ।
DNSSEC - DNSSEC डोमेन नाम प्रणाली (DNS) को सुविधा हो जुन डोमेन नाम लुकअपमा प्रतिक्रियाहरू प्रमाणित गर्दछ। यसले आक्रमणकर्ताहरूलाई DNS अनुरोधहरूमा प्रतिक्रियाहरूमा हेरफेर वा विषाक्तताबाट रोक्छ। DNS प्रविधि सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको थिएन। DNS इन्फ्रास्ट्रक्चरमा आक्रमणको एक उदाहरण DNS स्पूफिंग हो। जुन अवस्थामा एक आक्रमणकर्ताले DNS रिजल्भरको क्यासलाई अपहरण गर्दछ, जसले वेबसाइट भ्रमण गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई गलत IP ठेगाना प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ र आक्रमणकर्ताको खराब साइटलाई उनीहरूले अभिप्रेत गरेको स्थानको सट्टामा हेर्दछन्।
DNS विफलता - क्लौडनेसबाट नि: शुल्क DNS विफलता सेवा जुन तपाइँको साइटहरू वा वेब सेवाहरू अनलाइन प्रणाली वा नेटवर्क आउटेजमा राख्दछ। DNS विफलताको साथ तपाईं रिडन्डन्ट नेटवर्क जडानहरू बीच ट्राफिक पनि सार्न सक्नुहुन्छ।
व्यवस्थित DNS - व्यवस्थित DNS एक सेवा हो जुन एक पेशेवर DNS होस्टिंग कम्पनी द्वारा पूर्ण रूपले व्यवस्थित हो। एक व्यवस्थित DNS प्रदायकले उपयोगकर्ताहरूलाई वेबमा आधारित नियन्त्रण प्यानल प्रयोग गरेर उनीहरूको DNS ट्राफिक प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ।
कुनै पनि कास्ट DNS - Anycast DNS एक साधारण अवधारणा हो - तपाईं एकल गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुनेछ धेरै फरक सडकहरूको अनुसरण गरेर। सबै यातायात एक मार्ग तल जानुको सट्टा, एनीकास्ट DNS बहु स्थानहरू प्रयोग गर्दछ जुन नेटवर्कमा क्वेरीहरू प्राप्त गर्दछ, तर विभिन्न भौगोलिक स्थानहरूमा। यहाँ उद्देश्य नेटवर्क को लागी एक विशेष DNS सर्भर को लागी एक उपयोगकर्ता को लागी छोटो मार्ग पत्ता लगाउन को लागी हो।
उद्यम DNS - ClouDNS 'इन्टरप्राइज DNS नेटवर्क प्रत्येक सेकेन्ड लाखौं प्रश्नहरूको प्रक्रिया गर्न डिजाइन गरिएको छ। तिनीहरूको मूल्य निर्धारण मोडेल क्वेरी बिलि basedमा आधारित छैन। तपाइँलाई तपाइँको चुचुराहरूको लागि कहिले बिल दिईने छैन र तपाइँको डोमेन नामले कहिले पनि काम गर्न रोकिनेछैन, किनभने DNS क्वेरी सीमाहरूको कारण। कुनै पनि प्रकारको DNS क्वेरी बाढीको लागि तपाईलाई बिल आउने छैन।
SSL प्रमाणपत्र - SSL प्रमाणपत्रहरू तपाइँको ग्राहकको व्यक्तिगत डेटा पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, र पहिचान जानकारी सहित सुरक्षा गर्दछ। एक SSL प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको अनलाइन व्यापार मा तपाइँको ग्राहकहरु को आत्मविश्वास बढाउन को लागी एक सजिलो तरीका हो।
निजी DNS सर्भरहरू - निजी DNS सर्भरहरू पूर्ण सेतो लेबल DNS सर्भरहरू हुन्। जब तपाईं एक निजी DNS सर्भर प्राप्त गर्नुहुन्छ, यो तिनीहरूको नेटवर्क र वेब ईन्टरफेसको साथ लिंक हुनेछ। सर्भर तिनीहरूको प्रणाली प्रशासकहरु द्वारा प्रबंधित र समर्थित गरीन्छ र तपाइँ तपाइँको सबै डोमेनहरू क्लाउडएनएस वेब ईन्टरफेस मार्फत प्रबन्ध गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
CloudDNS २०१० देखि व्यवस्थित DNS प्रदायक हो। तिनीहरूको मिशन भनेको ग्रहमा उत्तम DNS सेवाहरू प्रदान गर्नु हो। तिनीहरू निरन्तर अपग्रेड र विस्तार गर्दै छन् आफ्नो नेटवर्क स्तर मा पार गर्न र ग्राहकहरु लाई उच्चतम ROI ल्याउन। तिनीहरूको नोकास्ट DNS पूर्वाधारमा 2010 महादेशमा १ countries देशहरूमा अवस्थित २ different फरक डाटा केन्द्रहरू सामेल छन्।
त्यहाँ धेरै पटक छैन कि तपाईं दुबै पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको अनलाइन गुणहरूको अनावश्यकता, गति र विश्वसनीयता बढाउन सक्नुहुनेछ - तर हामीले त्यस्तै गर्‍यौं। केवल एक खोजी गर्नुहोस् DNS आउटेज र हेर्नुहोस् कति कम्पनीहरूले उनीहरूको DNS विश्वसनीयताका साथ समस्याहरू थिए।
नि: शुल्क ClouDNS खाताको लागि साइन अप गर्नुहोस्
नोट: यस लेखमा प्रदान गरिएको लिंक हाम्रो सम्बद्ध लिंक हो।
टैग: एक रेकर्डबादलहरुcname रेकर्डdnsडोमेन नाम व्यवस्थापनडोमेन नाम सर्भरडोमेन नाम सर्भर गतिडोमेन रिजोलुसनडोमेन गतिव्यवस्थित डीएनएसmx रेकर्डनाम सर्भरसाइट गतिगति
StitcherAds: सामाजिक विज्ञापन प्रबंधन, परीक्षण, एम्प्लिफिकेशन, र निजीकरण
खोज इन्जिन रैंकिंग र रूपान्तरणहरूमा सामग्री-लम्बाइको प्रभाव